एउटा घर बेच्ने प्रार्थना। ? सेन्ट जोसेफ र भगवान पाई
घर बेच्नको लागि प्रार्थना। दिनहुँ हामीलाई प्रस्तुत गरिने सबै अनुरोधहरू र कार्यहरूमा प्रार्थनालाई ध्यानमा राख्नु ठूलो महत्त्वको छ। यदि हामी एक आवश्यक छ भने एक घर बेच्न प्रार्थना सही वाक्य खोज्नको लागि हामीलाई थाहा हुनुपर्दछ।
हामीलाई चाहिने सबै कुराको लागि प्रार्थनाहरू छन् र एउटा घर बेच्नुहोस्, कुनै श doubt्का बिना, त्यस्तो प्रक्रिया हो जुन हामीलाई सर्वोच्च प्राणीको दिशा चाहिन्छ जुन हामीलाई राम्रो निर्णयहरू गर्न अग्रसर गर्दछ जुन यसलाई हल्का रूपमा लिनुहुँदैन।
प्रार्थनामा हामी शान्ति र बुद्धिको मात्र पाउँदछौं, हामीलाई मात्र आवश्यक कार्यको लागि चाहिएको कुरा।
1 के घर बेच्नको लागि प्रार्थना बलियो छ?
1.1 स्यान होसेलाई घर बेच्न प्रार्थना
1.2 राम्रो बिक्री भएको घर बेच्नको लागि प्रार्थना गर्नुहोस्
2 के म दुबै वाक्य भन्न सक्छु?
के घर बेच्नको लागि प्रार्थना बलियो छ?
प्रार्थना शक्तिशाली छजहाँ भए पनि, तपाई जुनसुकै समयमा पनि गर्नुहोस्, प्रार्थना नै हाम्रो सर्वोत्तम हतियार र उपकरण हुनेछ जसले हामीलाई त्यस्तो परिस्थितिहरूमा पनि बाटोहरू पत्ता लगाउन मद्दत गर्दछ जहाँ हामी सोच्छौं कि त्यहाँ कुनै पनि छैन।
र यो वास्तवमै यी सबैभन्दा कठिन अवस्थामा प्रार्थनाहरू सब भन्दा शक्तिशाली भएको छ।
घरको बिक्रीमा निश्चित कठिनाइ हुन सक्छ, धेरै पटक यो छिटो बेच्न आवश्यक हुन्छ र सम्पत्ति किन्न चाहने कसैलाई चासो दिनको लागि यो केही रोचक हुन्छ, यी घटनाहरूमा यसलाई रेकर्ड समयमा बेच्नको लागि प्रार्थनाभन्दा राम्रो अरू केहि छैन।
त्यहाँ केही पनि छैन जुन प्रार्थनाले प्राप्त गर्न सक्दैन र यो पूर्ण सत्य हो।
यदि यसको विपरित, के खोजिएको हो भने यसलाई बेच्न जसले यसलाई हामी दिन्छौं भन्ने हेरचाह प्रदान गर्दछ, किनकि घर आफैंमा ठूलो भावनात्मक मूल्य हुन्छ, त्यसैले खरीददारको खोजी अझ गाह्रो हुन्छ।
प्रार्थना हामीले अपेक्षा गरेको खरिदकर्तालाई देखाउन सकिन्छ, जुन मूल्यसँग समायोजन हुन्छ र यसले घरलाई यसको खरावबाट बच्न आवश्यक हेरचाह र प्रशंसा दिन्छ।
प्रार्थनाको शक्तिमा सम्पूर्ण विश्वास राख्दा हामीलाई चाहिने चमत्कारको लागि पर्खन उर्जा दिन सकिन्छ।
स्यान होसेलाई घर बेच्न प्रार्थना
ओह, अविश्वसनीय सेन्ट जोसेफ, तपाईले जसलाई हाम्रो प्रभुले कैबिनेटमेकरको जागिर शिक्षित गर्नुभयो, र यो पुष्टि भयो कि तपाई सदाको लागि राम्रो हुनुहुन्छ, मेरो माग सुन्नुहोस्।
म तपाईं अब मलाई मद्दत गर्न चाहानुहुन्छ कसरी तपाईंले आफ्नो धर्मपुत्र येशू लाई कसरी मद्दत गर्नुभयो, र तपाईं जस्तो आफ्नो संस्कृति र सीपको साथ तपाईंले अरू धेरैलाई आवासको मामलामा सहयोग गर्नुभयो। म यो (बेच्ने घर वा सम्पत्ती) छिटो, सजिलो र लाभदायक तरीकामा बेच्न चाहन्छु।
र म तपाईंलाई बिन्ती गर्दछु मेरो इच्छालाई राम्रो ग्राहकको साथ पुग्न, जो इच्छुक छ, जसले बनाउँछ र सभ्य छ, र तपाई मलाई स्वागत गर्नुहुन्छ कि केहि पनि बिक्रीको द्रुत समाप्ति रोक्दैन।
प्रिय सेन्ट जोसेफ, मलाई थाहा छ कि तपाईंले मेरो लागि आफ्नो हृदयको कृपाको लागि र यसमा पूर्ण समयको लागि यो गठन गर्नुभयो, तर अहिले मेरो कठिनाइ एकदम ठूलो छ र यो हतारमा गर्नुपर्‍यो।
सेन्ट जोसेफ, म आफैंलाई गाह्रो परिदृश्यमा राख्छु, मेरो टाउको अन्धकारमा राखिएको छ र म हाम्रा प्रभुले सहन गरेसम्म सहने छु, जबसम्म यो (घर वा सम्पत्ती प्रतिस्थापन गरिएको छैन) पूर्ण हुँदैन।
हामी तपाईंलाई आवश्यक खरीददारहरूलाई मार्गनिर्देशन गर्न बिन्ती गर्दछौं, ताकि हामी दुबै पक्षलाई अनुकूल सम्झौताको साथ लेनदेन कार्यान्वयन गर्न सक्दछौं, र सकेसम्म चाँडो।
त्यसोभए, सन्त जोसेफ, म हाम्रो महान भगवानको अगाडि सहमत छु कि तपाईले मेरो सदा कृतज्ञता सदाको लागि जम्मा गर्नु हुनेछ र मँ जहाँ जाउँछु तपाईंको ओठमा तपाईंको शान्त नाम राख्नेछु।
सान होसे एक सेन्ट छ जसको लागि हामीले यस्ता अवस्थाहरूमा जानुपर्दछ किनभने उनलाई एक सिकर्मीका रूपमा अचल सम्पत्तिले हाम्रो जीवनमा कस्तो मूल्य हुन सक्छ भन्ने कुरा थाहा छ।
उहाँसँग कुराकानी गरेमा हामी पर्खिरहेका समाधानहरू फेला पार्न मद्दत पुर्‍याउँछौं, यो कुरा सम्झनुहोस् कि प्रार्थना शक्तिशाली छ र साथै, यदि हामी यो सहि भएर गर्छौं भने यो अझ शक्तिशाली छ।
हामी कुनै संतलाई उनीहरूको शक्ति वा प्रभावकारितामा श cannot्का गर्न सक्दैनौं तर यसको विपरित, हामीले विश्वास गर्नुपर्दछ र विश्वास गर्नुपर्दछ कि ती प्रत्येकले हाम्रो चिन्ताको समाधान फेला पार्न मद्दत गर्दछ।
La सेन्ट जोसेफलाई प्रार्थना घर बेच्नु प्रभावकारी र चमत्कारीक हुन्छ।
राम्रो बिक्री भएको घर बेच्नको लागि प्रार्थना गर्नुहोस्
हे भगवान, यस घरको लागि मलाई धन्यबाद दिन को लागी धन्यवाद। म यहाँ बसेको बर्षहरु को लागी उहाँलाई प्राप्त गरेको खुशी को लागी धन्यवाद। मलाई बिक्रीको लागि तैयार गर्न मलाई के गर्नु पर्छ देखाउनुहोस्।
म प्रार्थना गर्दछु कि मेरो घर एकदम छिटो बेच्नेछ। मलाई मेरो मुटुमा कुनै डर हुनेछैन किनकि मलाई थाहा छ तपाईंसँग यो किन्नको लागि सही खरीददार छ।
म तपाईलाई इमानदार हुन अनुग्रह दिन चाहन्छु र मँ माग्दै छु कि लोभी छैन।
मलाई थाहा छ मलाई केवल एक खरीददार चाहिएको छ र म तपाईंलाई यो चाँडै पठाउन भन्दछु। म तपाईंलाई यस बिक्रीबाट ल्याउने वृद्धिको आधारमा तपाईंलाई दिने वचन दिन्छु र तपाईंलाई यस व्यवसायमा सम्मान दिन्छु।
म पनि नयाँ ठाउँका लागि प्रार्थना गर्दछु जहाँ तपाईं मलाई लैजानुहुन्छ।
तिमी मलाई तयार पार्न सक्छौ ताकि म त्यो नयाँ घरमा येशूको आनन्दमा रहेको प्रेममा आनन्द र शान्ति पाउँदछु।
घर बेच्ने क्रममा राम्रो सम्झौताको लागि प्रार्थना हाम्रो आन्तरिकबाट सन्तमा जसलाई सम्बोधन गरिएको छ शुद्ध र सहि प्रवाहमा प्रवाहित हुनुपर्दछ।
त्यसकारण यो सिफारिश गरिएको छ कि घरको शारीरिक र आध्यात्मिक सफाई गर्न जुन हामी बिक्री गर्न चाहन्छौं बिक्रीको राम्रो सम्झौता रोक्ने सबै चीजहरू हटाउने मनसायले बेच्न चाहन्छौं।
के म दुबै वाक्य भन्न सक्छु?
धेरै मानिसहरू प्रार्थना भन्दा धेरै प्रार्थना गर्न डराउँछन्। यस अवस्थामा चिन्ता नगर्नुहोस्।
दुबै प्रार्थना गर्न सक्नुहुन्छ र गर्नु पर्छ प्रार्थनाहरू कुनै समस्या बिना।
घर बेच्नको लागि कुनै पनि प्रार्थना कडा हुन्छ र तपाईको इच्छाको जति पटक प्रार्थना गरिनु पर्छ।
महत्त्वपूर्ण कुरा यो हो कि तपाईं परमेश्वर र स्यान होसेमा विश्वास गर्नुहुन्छ।
केवल यस तरिकाले यी दुई सन्तहरूले तपाईंको अनुग्रहको साथ मद्दत गर्दछ।